विश्वकप छनोट: नेपाललाई इतिहास रच्ने अवसर - BBC News नेपाली
विश्वकप छनोट: नेपाललाई इतिहास रच्ने अवसर
जिम्बाब्वेमा आइतवारदेखि शुरू हुने विश्व कप क्रिकेट छनोट प्रतियोगितामा सहभागी भएको नेपाली क्रिकेट टोलीले सर्वत्र चर्चा पाइरहेको छ।
समूह २ मा रहेको नेपालले आइतवार आफ्नो पहिलो खेल आयोजक जिम्बाब्वेसँग खेल्दैछ।
आफ्नो समूहमा अफगानिस्तान, स्कटल्याण्ड र हङकङसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालले सहभागी १० टोलीमध्ये शीर्ष ६ मा पर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालको उक्त लक्ष्यका चुनौती के छन्? भन्नेबारे राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी तथा जानकारहरूसँगको कुराकानी।
विनोद दास, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान तथा १९ वर्षमुनिको राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक:
तस्वीर कपीराइट Facebook
नेपालले खेलिरहेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गाह्रोमध्येको प्रतियोगिता यो हो। हाम्रो घरेलु संरचना त्यति बलियो छैन। त्यहीँ भएर माथिल्ला टोलीहरूसँग भिड्ने हाम्रो सामर्थ्य बनिसकेको छैन। यो हाम्रो लागि अवसर हो। अहिलेसम्मको हाम्रो खेल कौशल देखाउने मौका हो। खेल हो प्रत्येक दिन जुनसुकै टोलीको पनि उत्कृष्ट दिन हुन सक्छ। यर्थाथपरक भएर हेर्दा जिम्बाब्वेमा गएर प्रतिस्पर्धीहरूलाई हराउन सजिलो छैन। तर नेपालले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार खेल्यो भने हामीले एक दिवसीय खेल खेल्न पाउने देशको हैसियत बनाउन सक्छौँ। नेपालले बारम्बार युएइलाई हराएको छ, हंगकंगलाई पनि पराजित गरेको छ। अहिले वेस्ट इन्डिज खराब खेलिरहेको छ, जिम्बाब्वे पनि हालै अफगानिस्तानसँग पराजित भयो। सबै टोली लयमा छैनन् र संघर्ष गरिरहेका छन्। धेरै टोलीहरु घरेलु क्रिकेट संरचना कमजोर भएर संघर्ष गरिरहेका छन्। हामीले आफ्नो उत्कृष्ट खेल देखाउन सक्यौँ भने परिणाम दिन सक्छौँ। कुनै पनि टोलीसँगको खेल नेपालका लागि सहज हुने छैन। हाम्रो समूहमा रहेका जिम्बाब्वे र अफगानिस्तान दुवै टेष्ट खेल्न मान्यताप्राप्त टोली हुन्। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लामो अनुभव छ, घरेलु क्रिकेट पनि हाम्रो भन्दा बलियो छ। तर समूहका अन्य टोलीसँगको खेल पनि सजिलो छैन। नेपालको बलिङ र फिल्डिङ राम्रो छ, ब्याटिङमा पनि क्रमिक सुधार भएको छ। तर हामीले अझै लामो बाटो यात्रा गर्नै बाँकी छ।
राजू खड्का, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान तथा प्रशिक्षक चितवन क्रिकेट एकेडेमी:
तस्वीर कपीराइट Twitter
Image caption खड्काको एकेडेमीबाट सन्दीप लामिछानेले तालिम लिएका हुन्।
हामी पहिलो पटक छनोट प्रतियोगिता खेलिरहेका छौँ। त्यसमा पनि टेष्ट खेल मान्यता प्राप्त टोलीहरू यो प्रतियोगितामा खेलिरहेका छन्। मानसिक रूपमा हामी बलियो देखिन्छौँ। यो स्तरको क्रिकेट खेल्नमा हाम्रो तयारी के थियो त्यसमा नतिजा निर्भर रहन्छ। अहिले हामीले राम्रो क्रिकेट खेलिरहेका छौँ। त्यसमा कसरी खेल्नुपर्छ, के के योजना र रणनीति बनेको छ त्यो हेर्न त बाँकी छ। तर हामीभन्दा पनि हाम्रा प्रतिस्पर्धी टोलीलाई बढी दबाव हुन्छ किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा त्यति प्रतियोगिताहरू नखेलेको भएर र हामीले त्यति अनुभव नबटुलेको देखेर हाम्रो खेलाडीहरूको बारेमा उनीहरूलाई त्यति थहा पनि छैन। त्यही भएर हामीभन्दा पनि उनीहरु बढी दबावमा हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ। जिम्बाब्वेको विकेट कस्तो छ त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। मैले पत्रिकामा पढे अनुसार 'पीच' अलिकति 'स्लो' छ। यदि विकेटमा बल घुम्छ भने त्यसले नेपाली स्पिन बलरहरु सन्दीप लामिछाने, बसन्त रेग्मीहरूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने लाग्छ। सन्दीपले अहिले एकदमै राम्रो बलिङ गरेर विकेट लिइरहेको छ। उसले प्रतियोगितामा राम्रो गर्न सक्यो भने नेपाललाई पनि फाइदा पुग्छ। उसको प्रदर्शनमा नेपाली टिमले यो प्रतियोगितामा धेरै भर गरेको छ।
विश्वकप छनोट क्रिकेट: अवसर र चुनौती दुवै
सन्दीप लामिछाने: क्रिश गेलको क्लबमा पनि
तस्वीर कपीराइट Raman Shiwakoti
पवन अग्रवाल, पूर्व राष्ट्रिय कप्तान:
एउटा टोलीका रूपमा हाम्रो प्रमुख चुनौती ब्याटिङ हो। ब्याटिङमा सुधार गर्न सक्यौँ भने हामी हाम्रा प्रतिद्वन्द्वी टोलीहरूलाई टक्कर दिएर खेल्न सक्छौँ। ब्याटिङमा सुधार गर्न भर्खरै भारतबाट प्रशिक्षक पनि ल्याएका छौँ। तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन। हामीले धेरै प्रतियोगिताहरू खेल्न पाएका छैनौँ। त्यहीँ भएर हाम्रो ब्याटिङ नसुध्रिएको हो। हामी नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैदानमा मात्रै खेल्छौँ। त्यहीँ भएर पनि त्यसले पनि प्रभाव पारेको छ। शीर्ष ६ टोली बन्न सक्नेमा म आशावादी छु। डिभिजन २ मा जसरी हामीले अन्तिम ओभरसम्म खेलेर म्याचहरू जित्यौँ त्यसले टोलीको मनोबल बढाएको छ। अन्तिम समयमा पनि खेल जित्न सक्छौँ भन्ने महसुस गर्नु ठूलो उपलब्धि हो। युएइविरुद्धको अभ्यास खेलमा पनि हाम्रो ब्याटिङमा केही सुधार देखिएको छ र हामीले खेल जित्यौँ। अफ्गानिस्तानले एकदमै राम्रो खेलिरहेको छ। त्यहीँ भएर उसलाई हराउन निकै गाह्रो देखिन्छ। यो तहको प्रतियोगितामा सबै टोलीसँगको खेल एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक नै हुन्छ, सबै खेल कठिन नै हुन्छ।
विश्वकप क्रिकेट छनोटको तयारी कस्तो छ?
भावना घिमिरे, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपाल
यो प्रतियोगितामा हामीले राम्रो प्रदर्शन गर्‍यौँ र हामीले राम्रो खेल्यौँ भने एक दिवसीय क्रिकेट खेल्ने देशको हैसियत पाउन सक्छौँ। त्यस्तो हुँदा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले ठूलो उपलब्धि हात पार्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले १३ देश सम्मिलित एक दिवसीय लिग प्रतियोगिता गराउने भनिरहेको छ। त्यसमा हामी छनोट हुन सक्यौँ भने देशभित्र र बाहिर गरी ३६ वटा सम्म म्याच खेल्न पाउँछौँ। त्यसबाहेक क्रिकेटको विकासका लागि उसले थप रकम पनि उपलब्ध गराउँछ। यदि डिभिजन १ मा नै रहिरह्यौँ भने कस्तो खालको प्रतियोगिताहरू खेल्न पाउँछौँ त्यो अहिले तय भइसकेको छैन। हामी विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न गइरहेका छौँ। तर हाम्रो देशभित्र क्रिकेट बोर्ड नै अस्तित्वमा छैन। टोलीले राम्रो खेल्दा खेल्दै पनि व्यावसायिक संरचनाहरु नहुँदा त्यसले क्रिकेटको विकासमा बाधा पु्र्‍याउँछ। यदि कुनै दिन टेष्ट खेल्ने मान्यता पाउने देश बन्ने लक्ष्य साकार बनाउने हो भने हामीले क्यानको नेतृत्वमा जो आए पनि त्यसबाहेकको चुस्तदुरुस्त काम गर्ने विज्ञ सम्मिलित प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नैपर्छ।
क्रिकेट टोलीका सदस्यलाई जनही ३ लाख